ဝက်ဖို့ဒ် နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် မတိုင်မီ အချက်အလက် တချို့ နဲ့ အခြား ချယ်လ်ဆီး သတင်းတိုများ - SPORTS MYANMAR
ဝက်ဖို့ဒ် နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် မတိုင်မီ အချက်အလက် တချို့ နဲ့ အခြား ချယ်လ်ဆီး သတင်းတိုများ
By Edi Tor November 2, 2019
* ယနေ့ည ၁၂ နာရီ အချိန် မှာ ရင်ဆိုင် ကစား ကြမယ့် ဝက်ဖို့ဒ် – ချယ်လ်ဆီး နောက်ဆုံး ၆ကြိမ် ပရီးမီးယားလိဂ် ထိပ်တိုက် တွေ့ဆုံမှု မှာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း က ၅ကြိမ် အနိုင် ရခဲ့ပြီး ဝက်ဖို့ဒ် အသင်း က တကြိမ် အနိုင် ရခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့ဒီ ၆ကြိမ် မှာ ၂သင်းပေါင်း သွင်းဂိုး ၂၇ ဂိုး အထိ ရှိခဲ့ကာ ၊ ချယ်လ်ဆီး အသင်း က ၁၆ ဂိုး ရရှိခဲ့ပြီး ဝက်ဖို့ဒ် အသင်း က ၁၁ ဂိုး ရခဲ့ပါတယ် ။
* ဝက်ဖို့ဒ် အသင်း ဟာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း နဲ့ ရင်ဆိုင် ကစား ခဲ့ရတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၁၁ ပွဲ မှာ တပွဲသာ အနိုင်ရခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ဖေဖော်ဝါရီ မှာ အိမ်ကွင်း Vicarage Road မှာ ကစား ခဲ့စဉ် က ချယ်လ်ဆီး ကို ၄ – ၁ နဲ့ အနိုင် ရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပြိုင်ပွဲစုံ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ကို အိမ်ကွင်း မှာ လက်ခံ ကစားထားတဲ့ ၁၀ ပွဲမှာတော့ ဝက်ဖို့ဒ် တို့ ၂ပွဲသာ အနိုင် ရခဲ့ပါတယ် ။
* ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဟာ နောက်ဆုံး ကစား ခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် အဝေးကွင်း ပွဲစဉ် ၄ ပွဲဆက် ၃ဂိုး နဲ့ အထက် သွင်းယူကာ အနိုင် ရခဲ့ပြီး ဒါဟာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း သမိုင်း တလျှောက် ပထမဆုံး အကြိမ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။
Soccer Football – Premier League – Southampton v Chelsea – St Mary’s Stadium, Southampton, Britain – October 6, 2019 Chelsea’s Michy Batshuayi celebrates scoring their fourth goal with Christian Pulisic and team mates REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or “live” services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.
* ဒါ့အပြင် ယနေ့ည မှာ ဝက်ဖို့ဒ် အသင်း ကို ၃ဂိုး အထက် သွင်းယူပြီး အနိုင် ရဦးမယ် ဆိုရင် ပရီးမီးယားလိဂ် ကို ခေါ်တွင် ခဲ့တဲ့ သမိုင်းတလျှောက် ပထမဆုံး အဝေးကွင်း ၅ပွဲဆက် ၊ ၃ဂိုး နဲ့ အထက် သွင်းယူပြီး အနိုင်ရတဲ့ ပထမဆုံး အသင်း အဖြစ် သမိုင်း ဝင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အရင် ပရီးမီးယားလိဂ် လို့ မခေါ်တွင်ခင် အင်္ဂလန် ပထမတန်းလိဂ် မှာတော့ အဲဗာတန် အသင်း ဟာ ၁၉၂၇ ခုနှစ် မှာ ထို မှတ်တမ်း ကို တကြိမ် ရယူ ခဲ့ဖူးပါတယ် ။
* ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဟာ ဒီရာသီ မှာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ကို အဝေးကွင်း မှာ ဂိုးပြတ် အရေးနိမ့် ခဲ့ပြီးနောက် ပြိုင်ပွဲစုံ နောက်ဆုံး ၆ပွဲဆက် အနိုင် ရခဲ့ပြီး ဒါဟာ အသင်း ရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် လို့ ခေါ်တွင်ခဲ့တဲ့ သမိုင်း တလှျှေှာက် ရကြိမ်မြောက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။
* ဒီနေ့ည မှာ ဝက်ဖို့ဒ် ကို အနိုင်ရခဲ့မယ် ဆိုရင် ဖရန့် လမ်းပတ် ဟာ နည်းပြ သက်တမ်း တလျှောက် ပထမဆုံး အဝေးကွင်း ၅ပွဲဆက် ပရီးမီးယားလိဂ် နိုင်ပွဲ ကို ရယူ နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဟာလည်း ၂၀၁၈ စက်တင်ဘာ နောက်ပိုင်း ပထမဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ် အဝေးကွင်း ၅ပွဲဆက် အနိုင် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
* ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဟာ ထိပ်သီး ၆သင်း မဟုတ်တဲ့ ကလပ် တွေနဲ့ ရင်ဆိုင် ထားတဲ့ နောက်ဆုံး ၁၄ ပွဲမှာ လုံးဝ ရှုံးပွဲ မရှိခဲ့ပဲ ၁၀ ပွဲနိုင် ၊ ၄ပွဲ သရေ ရလဒ် ရရှိ ထားပါတယ် ။ ချယ်လ်ဆီး နည်းပြ ဖရန့် လမ်းပတ် ဟာ ကစားသမား ဘဝ မှာ ဝက်ဖို့ဒ် အသင်း နဲ့ ၆ ကြိမ် ရင်ဆိုင် ခဲ့ဖူးပြီး ၅ပွဲနိုင် ၊ ၁ပွဲ သရေ နဲ့ ကိုယ်တိုင် ၂ဂိုး သွင်းယူ ခဲ့ဖူးပါတယ် ။
* ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ ဘယ်နောက်ခံလူ မားကို့စ် အလွန်ဆို ဟာ ယနေ့ည ဝက်ဖို့ဒ် အသင်း နဲ့ အဝေးကွင်း ပွဲစဉ် မှာ ပါဝင် ကစားခဲ့မယ် ဆိုရင် ချယ်လ်ဆီး အတွက် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲ ၁၀၀ ပြည့်မြောက် တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဝက်ဖို့ဒ် အသင်း နည်းပြ ဖလောရက်စ် ဟာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း နဲ့ ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ ၆ကြိမ် စလုံး တပွဲ မှာ အနိုင်မရခဲ့ပဲ ၊ ၂ပွဲ သရေ ၊ ၄ပွဲ ရှုံးနိမ့် ခဲ့ပါတယ် ။
* ယနေ့ည ဝက်ဖို့ဒ် – ချယ်လ်ဆီး ပွဲစဉ် ကို ကွင်းလယ်ဒိုင် အန်သိုနီ တေလာ က တာဝန်ယူ ကိုင်တွယ် သွားမှာ ဖြစ်ပြီး VAR ကိုတော့ ဒိုင်လူကြီး မိုက်ဒင်း က တာဝန်ယူ သွားမယ် လို့ သိရပါတယ် ။
* ချယ်လ်ဆီး အသင်း နည်းပြ ဖရန့် လမ်းပတ် က နိုင်ငံ လက်ရွေးစင် ပွဲစဉ် တွေ ပြန်စဖို့ တပတ် အလိုမှာ နိုင်ပွဲ တွေ ရနိုင်သလောက် ရအောင် ကြိုးစား ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း ၊ အနိုင်မရပဲ international break သွားရတာထက် ၊ အနိုင်ကန်ပြီး သွားရတာ ကို ပိုပြီး နှစ်သက် ကြောင်း ဆိုခဲ့ပါတယ် ။
* ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ လူငယ် တိုက်စစ်မှူး တမ်မီ အေဘရာဟမ် နဲ့ ဝါရင့် တောင်ပံ ကစားသမား ဝီလီယံ တို့ဟာ နာမည်ကြီး အားကစား ဝက်ဘ်ဆိုက် တခု ဖြစ်တဲ့ Who scored ရဲ့ အောက်တိုဘာ တလတာ အကောင်းဆုံး အသင်း ထဲမှာ ပါဝင် ခဲ့ပါတယ် ။
* ဒဏ်ရာကြောင့် တလ ဝန်းကျင်လောက် အနားယူ နေခဲ့ရတဲ့ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ နောက်ခံလူ အီမာဆင် ဟာ ယနေ့ည ဝက်ဖို့ဒ် နဲ့ ပွဲစဉ် မှာ ပါဝင်ဖို့ အသင့် ဖြစ်နေပြီ လို့ ၄င်းရဲ့ တွစ်တာ အကောင့် ကနေ ချယ်လ်ဆီး ပရိသတ် တွေကို အသိပေး ခဲ့ပါတယ် ။
* ချယ်လ်ဆီး အသင်း နည်းပြ ဖရန့် လမ်းပတ် က လက်ရှိ အသင်း ရဲ့ တောင်ပံ တိုက်စစ် နေရာ မှာ ဝီလီယံ ၊ ပတ်ဒရို ၊ ပူလီဆစ် ၊ ဟတ်ဒ်ဆန် အိုဒွိုင်း တို့ ၄ဦးလုံး ဒဏ်ရာ ကင်းစင်နေသလို ပွဲထွက်ခွင့် အတွက် အပြိုင် ကြိုးစား နေတာကြောင့် သူ့ အတွက် ဘယ်သူ့ကို ပွဲထုတ်ပေးဖို့ ရွေးချယ် ရခက်နေပေမယ့် ပွဲထွက် အခင်းအကျင်း ကိုတော့ မကြာခဏ အပြောင်းအလဲ လုပ်ဖို့တော့ အစီအစဉ် မရှိဘူး လို့ မနေ့က ပွဲကြို သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ မှာ ဆိုခဲ့ပါတယ် ။